(၂၀၂၀)ခုနှစ် အတွက် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများ ရဲ့ တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း – Na Pann San
(၂၀၂၀)ခုနှစ် အတွက် ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟု သားသမီးများ ရဲ့ တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း
Na Pann | March 5, 2020 | Astrology | No Comments
ဒီ နှစ်(၂၀၂၀) အတွင်း ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေ အတွက် တကယ့်ကို ကြိုးတန်းပေါ် လမ်းလျှောက်ရတဲ့နှစ် တစ်ခုပါပဲ။ အတိမ်းအစောင်း မခံပါဘူး။ တစ်ခုအမှား လုပ်မိတာနဲ့ အဲဒီအမှားကြောင့်ပဲ ဘဝကနလန်ပြန်ထူဖို့ လွန်စွာခက်ခဲ သွားတတ်ပါတယ်။ သတိကပ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ မိမိ မသိနားမလည်ရင် နားလည်သူတွေကို ဆည်းကပ်ပါ။ အောက်ကျတယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
တစ်နှစ်လုံး အတွက် စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ ၊ လူပင်ပန်းစရာတွေ များနေတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရဲ့ငြိုငြင်မှုတွေကို ခံရတတ်သော်လည်း သူတို့တွေရဲ့ အကူအညီအထောက်အပံ့တော့ ရလွယ်ပါတယ်။ သားသမီးများ အတွက် စိတ်ပူပန်စရာတွေများ ရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်းမှ အခွင့်အရေးကောင်းများ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် အထက် ကမြှောက်စားခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။
အများနဲ့ မတူကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ခံရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ဝင်ငွေရလမ်းတွေကောင်းပေမယ့် လူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့် အကုန်အကျများ ရတတ်ပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာ ပရိယာယ်ကြွယ်စွာနေ ထိုင်တတ်မှပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ နေရာသစ် ၊ ဝန်းကျင်သစ်မှာ လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်။
လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ ၊ မိတ်ဆွေတွေကို အား မကိုးပါနဲ့။ ဒီနှစ်ဟာ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ အဆင်ပြေနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေအတွက် အတိုက်အခံ ၊ အနှောင့်အယှက်ကြုံမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဝေးကွာနေတဲ့သူများနဲ့ ပြန်လည် ဆုံဆည်းခွင့်တွေ ရလာတတ်ပါတယ်။ ကွဲနေတဲ့အိမ်ထောင်ဘက်တွေ ၊ ချစ်သူဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
စိတ်လောပြီး သူများ အကူအညီနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သမျှတွေက အဆင်မပြေမှုတွေ ကိုပေးစွမ်းပါတယ်။ လူမှုရေးကိစ္စတွေ ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စတွေမှာ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ တာဝန်ပေးခြင်း ခံရတတ်ပါတယ်။ အဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါတွေရဲ့ရန်မူခြင်းမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။ သတိတရားရှေ့ထားနေပါ။ မြွေပေါတဲ့ နေရာတွေမှာ နေထိုင်သူများ ညဘက်အပြင်ထွက်ရင် လည်ရှည်ဖိနပ်တွေစီးထားပါ။
ဒီနှစ်ဟာ ရောဂါဥပဒ်တွေ အလွန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ လေးဘက်နာ ၊ အရိုးအကြော ၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းတွေ ၊ အကျိတ်အဖုထွက်ခြင်းတွေ အထူးကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလေးအပင်မလိုက်ရာကနေ ခါးနာပြီး လနဲ့ချီမပျောက်တာမျိုးတွေ အထူးကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဆီး ၊ ကျောက်ကပ် သတိထားပါ။ ဦးနှောက် အာရုံကြောတွေ လဲဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ခရီးသွားရာကနေ ကျန်းမာရေးညံ့ သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
တစ်ခု သတိပေးချင်တာက ဒီနှစ်ဟာ အစားအသောက်မ ဆင်ခြင်ရာကစလို့ ရောဂါတိုးလာတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းခြင်း ၊ ဝယ်ခြင်း အလုပ်တွေ ၊ ထီရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေ ၊ ဓာတ်သတ္တု တူးဖော်ရေးအလုပ်တွေ ၊ ကုန်စုံဆိုင် ၊ စတိုးဆိုင် အလုပ်တွေ ၊ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ရေး အလုပ်တွေ ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အိုင်တီ ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး အလုပ်တွေ အထူးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့နှစ် တစ်ခုပါပဲ။
နိုင်ငံခြားသား ၊ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်သမျှ အဆင်ပြေမှုတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ စတင် ကြိုးစားတဲ့သူတွေကတော့ အခက်အခဲများ တတ်ပါတယ်။ ဆေးကျတာမျိုးတွေ ၊ calling ကြာတာမျိုးတွေ အလွန်မှဖြစ်တတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ဆို ဒီ ၂၀၂၀ မှာ လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေ ၊ဘာသာစကားတွေ သင်ယူထားပါ။
ဒီနှစ်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး ရှေ့နှစ်မှ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်တာက ပိုမိုနီးစပ် အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးအချက်က လူလိမ်ခံရခြင်းပါပဲ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေက လိမ်သွားတာမျိုးတွေ ၊ တပည့်လူယုံတွေ လိမ်လည်သွားတာမျိုးတွေ အထူးကြုံရ တတ်ပါတယ်။ အာမခံပေးတာ ၊ သက်သေလိုက်ပေးတာမျိုးတွေက အထူးပြဿနာကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ် လက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆို သတိသာထားလိုက်ပါတော့။
နောက်ထပ် သတိပေးလိုတာက ဒီနှစ်မှာ လုပ်ငန်းသစ်စမယ်ဆို သတိထားပါ။ မစပါနဲ့လို့မပြောလိုပေမယ့် လုပ်မယ်ဆို အဘက်ဘက် ကပြင်ဆင် လုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသစ် စီးပွားသစ်ရဲ့ ၈၀% က အဆင်မပြေ ကျဆုံးတတ် တဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်နေ လို့ပါပဲ။ အခုလုပ်မယ့် အလုပ်က ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ် ၊ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလဲ ရှိရင်တောင်မှ အောင်မြင်ဖို့မသေချာ တဲ့နှစ်တစ်ခုပါပဲ။
ဒါကြောင့် အလုပ်သစ် စမယ်ဆို မလောပါနဲ့။ အချိန်ယူပါ။ လိုအပ်တဲ့ data သေချာကောက်ယူပါ။ အလျင်စလို မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ နောက်တစ်ခု သတိပေးလိုတာကတော့ ဇာတာရှင်အနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ စပ်တူကိစ္စတွေရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စပ်တူလုပ်ငန်း မှန်သမျှ စိတ်ဝမ်းကွဲဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေ တတ်ပါတယ်။ အရမ်းချစ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ စပ်တူလုပ်ရင်တောင်မှ အလုပ်ကြောင့်ပဲ စိတ်ကွက်စရာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စပ်တူရှယ်ယာ အလုပ်များ အလွန်သတိထားရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ဝယ်မယ်လို့ ဒီနှစ်ဆုံးဖြတ်ထားရင် အရှုပ်အရှင်းကင်းလား စုံစမ်းပြီးမှ ဝယ်စေချင်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင် အောင်မြင်မှုရဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပေးလိုတာကတော့ အများအတွက် စဉ်းစားပြီးလုပ်ပါ။ ဥပမာ အမြတ်ရဖို့ချည်း အာရုံမစိုက်ဘဲ ဝယ်ယူသူ satisfy ဖြစ်ဖို့ကို ဦးစားပေးစေချင်ပါတယ်။ ပေးဆပ်မှုတွေ နဲ့ရှင်သန်မှပဲ ဒီနှစ်ကအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ အချစ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတာ လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေ အထူးကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဓိကတော့ ချစ်သူက မိမိကိုစိတ်မပါတော့တာမျိုး ၊ စိတ်ကုန်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်လွယ်တတ်ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ တကယ်အပြီးဝေးတာ မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်မှာ ကွဲသွားတဲ့ ချစ်သူနဲ့ပြန်ဆုံဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စတွေမှာတော့ လင်မယားဇနီးမောင်နှံ အချင်းချင်း အဆင်ပြေပေမယ့် ကြားကသွေးထိုးစကားတွေကြောင့် အဆင်ပြေဖို့ မလွယ်တာမျိုး တွေ့ရှိရပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး နားလည်မှုတွေရှိမှပဲ အိမ်ထောင်ရေးသာယာမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။
ဒီနှစ်မှာ စနေသား ၊ တနင်္ဂနွေသားနှင့် ကြာသပတေး သားသမီးတွေက မိမိအတွက်ကောင်းကျိုးပေးမယ့်နေ့သားတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ထီကံ ၊ ကံစမ်းမဲကံ အားကောင်းနေတဲ့ အတွက် ထီထိုးတာမျိုးတွေ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၊ ဇူလိုင်လနဲ့ စက်တင်ဘာလတွေ မှာ ကံအားနည်းမှုတွေ ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ မေလနှင့် သြဂုတ်လနဲ့ ဒီဇင်ဘာလတွေက အဆင်ပြေ ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူး/ရာဟုနေ့ဖွားတွေ ဟာ အခုနှစ်၂၀၂၀မှာ အသက်အားဖြင့် ၂နှစ် ၊ ၉နှစ် ၊ ၁၆နှစ် ၊၂၃နှစ် ၊ ၃၀နှစ် ၊ ၃၇နှစ် ၊ ၄၄နှစ် ၊ ၅၁နှစ် ၊ ၅၈နှစ် ၊ ၆၅နှစ် ၊ ၇၂နှစ် စသောအသက်အပိုင်းအခြားတွေမှာ ရောက်နေချိန်ဆိုရင်တော့ ကံအညံ့တွေများပြားပြီး ကံဇာတာညှိုးနွမ်းနေတယ် ဆိုတာကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီအသက်အပိုင်း အခြားရောက်နေသူတွေကတော့ နီးစပ်တဲ့ဆရာတွေ ဆီမှာမေးမြန်းပြီး အသေးစိပ်အကြံဉာဏ်ယူစေချင်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေ နဲ့ပြောရရင် ဒီနှစ်မှာစပ်တူရှောင်ပါ။ လုပ်ငန်းသစ်တွေကို သတိနဲ့ယှဉ်လုပ်ပါ။ အတ္တထက် ပရကို ပိုစဉ်းစားပါ။ နိုင်ငံခြား ကိစ္စတွေမှာ အခက်အခဲများနိုင်ပါတယ်။ ပညာသင်ယူတဲ့အပိုင်း ၊ အသက်မွေးမှု ပညာသင်တဲ့ကိစ္စတွေ မှာတော့ အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေ ကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကုသိုလ်အလုပ် ၊ ဘာသာရေး အလုပ်တွေကတော့ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်း ၊ လူအပင်ပန်းခံမှ အဆင်ပြေမဲ့နှစ်လို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ဗျ။
– မွေးနေ့နံနက်တွင် နီးစပ်ရာစေတီရဲ့ စနေထောင့်မှာ မီးခိုးရောင်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်လျက် နွားနို့တစ်ခွက် လှူဒါန်းဆုတောင်းတာမျိုး မကြာခဏလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
– ရဟန်းသံဃာတွေ ကို ယပ်နှင့်ဖိနပ် မကြာခဏလှူပေးလိုက်ပါ။
– ပဋ္ဌာန်းကို တစ်နေ့တစ်ခေါက် အနည်းဆုံးရွတ်ပေးပါ။
– ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါးကို ရည်မှန်းပြီးတော့ မကြာခဏဆွမ်းကပ်ပေးပါ။
– ဘုရားစေတီရောက်တိုင်း အာရုံခံတန်ဆောင်းတွေမှာ တံမြက်စည်းလှဲကျင်းပေးပါ။ ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ)
နယုန်လဆန်း ( ၁ ) ရက်နေ့ ( ၂၂ .၅ .၂၀၂၀ ) မှ နယုန်လကွယ်နေ့( ၁၉ . ၆ .၂၀၂၀ )အထိ အကောင်းဆုံး ဘုရားယတြာ
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ ခုနှစ်ရက် သားသမီး ၁ ပတ်စာဟောစာတမ်း ( ၃.၅.၂၀၂၀ ရက် မှ ၉ .၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ) အထိ
စနေ သားသမီးများ ရဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်အ တွက် (၁)နှစ်လုံး စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း
မနက်ဖြန် မေလ (၁၄) ရက်နေ့ မှာ ဒါလေး လုပ်ကြည့်ပါ . . .
နဂါးဖမ်းပွဲ ကျင်းပတော့မည်လား ..? ( တိုက်မှာလား ညှိမှာလား ရှောင်မှာလား အရှုံးပေးမှာလား ဘာဆက်လုပ်မလဲ သာကောနဂါး )
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီး လူနာများ ပျောက်ကင်းပြီးပါက ဗိုင်းရပ်စ် ပြန်ကူးစက်မခံရစေနိုင်တဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုဟာ လပိုင်းအတွင်း ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ဟု ထုတ်ပြန်
ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်မှု သတိပေးနှိုးဆော်ချက် ထပ်မံထုတ်ပြန်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက ဧရိယာ အများစု ကို သူပိုင်တယ် လို့ တရုတ်ကြော်ငြာချက် အမေရိကန် အတိအတင်းပယ်ချ
Huawei ကုမ္ပဏီ ကို တားမြစ်ပိတ်ပင် အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ပြုလုပ်တော့မယ့် ဗြိတိန်
ရဲမေ တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင် နှဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ် မန္တလေးညတစ်ည